LR41: wax badan ka baro unugyadan ama baytariyada | Qalab bilaash ah
LR41: wax badan ka baro baytariyadaan
Isaac | 05/10/2021 08:39 | Qaybaha elektarooniga ah
Suuqa dhexdiisa waxaa jira tiro aad u badan baytariyada kala duwan, awoodaha, iyo sidoo kale leh qaabab badan. Mid kastaa wuxuu ku jihaysan yahay nooc gaar ah oo qalab ah. Horay ayaanu u lafaguray mid iyaga ka mid ah, sida ay tahay CR2032. Hadda, maqaalkan, waxaan ku falanqayn doonnaa "walaashii" tan, sida ay tahay LR41, kaas oo waliba iska leh waxa loogu yeero baytariyada badhanka.
Sifooyinkeeda ayaa ka dhigaysa mid ku habboon noocyada qaarkood codsiyada halkaas oo cabbirka iyo muddadu muhiim u yihiin, iyo dalabka awoodda oo aan u sarrayn sida aaladaha kale ee waaweyn ...
1 Waa maxay batteriga LR41?
1.1 Halka laga iibsado baytariyada LR41
2 Wax badan oo ku saabsan baytariyada
2.1 Noocyada baytariga
2.1.1 Dib looma buuxin karo
2.1.2 Dib loo buuxin karo
Waa maxay batteriga LR41?
La batteriga ama batteriga LR41 waa nooc ka mid ah baytariga qoyska badhanka. Waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa alkaline oo aan dib loo buuxin karin. Xooggeedu waa 1.5 volts, oo leh cabbir aad u yar oo loogu talagalay aaladaha elektiroonigga ah ee u baahan baahida tamarta yar, sida saacadaha, tilmaamayaasha laser, xisaabiyaha, iyo aaladaha kale ee elektiroonigga ah.
Marka laga hadlayo halabuurka unugyadooda, baytariyada noocan ah ayaa adeegsada kiimikooyin kala duwan si ay u shaqayso. Iyada oo leh biraha dibedda ah oo tiirkiisu togan yahay qaybta fidsan ee inta badan qoraalladu leeyihiin, iyadoo wejiga ka soo horjeeda uu yahay tiirka taban. Sida muddada, waxay noqon karaan ilaa 3 sano kaydinta.
Halka laga iibsado baytariyada LR41
Noocyada baytariyada waxaad ka heli kartaa dhawr dukaan oo khaas ah, inkasta oo aanay u fududaan sida loo helo nooca A, oo caan ah. Si kastaba ha noqotee, aaladaha sida Amazon waad awoodaa iibsato unug kasta ama baakado:
Xidhmada Maxell ee 10 baytariga nooca LR41
Xidhmada Geela oo ka kooban 2 unug LR41
Duracell 376/377 LR41 cutub
Wax badan oo ku saabsan baytariyada
Waa inay noqotaa kala saar batteriga iyo batteriga, inkasta oo guud ahaan labada ereyba loo adeegsado danayn la'aan (sababtu waa erayga batteriga Ingiriisiga, kaas oo ah mid aan mugdi ku jirin oo u shaqeeya labadaba), haddii aad rabto inaad adkayso, waxaad samayn kartaa kuwan soo socda:
Batariga: baytarigu wuu soo ceshan karaa lacagtiisa haddii koronto la siiyo, taas oo ah, ma jiraan baytariyo aan dib loo buuxin karin. Intaa waxaa dheer, waxay ku dhibtoonayaan is-saarid maalmo ama bilo marka aan la isticmaalin.
Pila: waxay maraysaa geedi socod aan laga laaban karin, marka la soo dejisto dib looma rari karo. Taa beddelkeeda, waxaa la kaydin karaa sanado iyada oo aan la is-bixin.
Xidhmooyinka waxaa loo qaybin karaa laba qoys oo waaweyn, iyo iyaga dhexdooda waxay sidoo kale sii wadi karaan in la qoro sida ku cad nooca iyo sifooyinka:
Dib looma buuxin karo
ka batariyada aan dib loo buuxin karin waa inaan la isku dayin inay rartaan, maadaama ay waxyeeli karaan, taas looma samayn. Waxaa loogu talagalay isticmaalka keliya. Kooxdan dhexdeeda waxaa ka mid ah:
Silsilad: waa kuwa ugu caansan, waana kuwa aad ka heli karto saacadaha derbiga, kontaroolada fog, iwm. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Alkaline: aad bay u badan yihiin maanta. Waxay ka kooban yihiin zinc sida anode iyo manganese dioxide sida cathode. Batariga noocaan ah waa mid aad u cimri dheer, waana in lagu hayaa agagaarka 25ºC ama ka yar si loo ilaaliyo si habboon. Marka loo eego cabirka, waxaa jira AA (LR6), AAA (LR03), AAAA (LR61), C (LR14), D (LR20), N (LR1) iyo A23 (8LR932), dhammaantood waa 1.5 volts oo leh cabbirro kala duwan , marka laga reebo kan ugu dambeeya oo ah 12V.
Salinas: Batariyadaani waxay leeyihiin kaarboon-kaarboon, waxayna sii kordhayaan isticmaalka iyadoo ay ugu wacan tahay awooddooda iyo muddadooda hoose marka la barbar dhigo kuwa alkaline-ka ah. Waxa kale oo aad ka heli doontaa isku nooc, sida AA, AAA, AAAA, iwm, laakiin waxay leeyihiin IEC iyo ANSI koodh kala duwan.
Lithium. Intaa waxaa dheer, waxay leeyihiin baaxad hawlgal oo aad u ballaaran, min -1ºC ilaa 30ºC. Gudaha waxaad ka heli kartaa disulfide birta lithium, sida 70v AA ama AAA, 1.5v lithium-thionyl colouro, 3.6v lithium manganese dioxide ...
Afar geesle. Waagii hore aad bay caan u ahaayeen, inkasta oo aan maanta aad loo isticmaalin baaxaddooda awgeed. Kuwaan, danabyada ka sarreeya 4.5v ayaa lagu gaari karaa.
Salinas: sida kuwa cylindrical -ka ah, sidoo kale waxay noqdeen kuwo la isticmaalay oo marar dhif ah ayaa loo adeegsadaa, kaliya codsiyada aadka u gaarka ah halkaas oo ay xoogaa ka faa'iidaysan karaan kuwa alkaline. Waxaad heshaa rag sida PP6 iyo PP9 ...
Lithium: Waxa kale oo jira baytariyada lithium laba jibbaaran, badiyaa leh lithium thionyl chloride ama lithium manganese dioxide. Labadaba 9v.
Badhan: qaybtan dhexdeeda LR41 ee maqaalkan ayaa geli doonta. Waxay yihiin baytariyaal, sida magacoodu tilmaamayo, u samaysan badhan. Waxaa loo adeegsadaa aaladaha leh baahi koronto oo yar iyo cabbir yar, sida saacadaha, qalabka gargaarka maqalka, iwm.
Alkaline: waa baytariyada 1.5v, oo leh koodhadh sida LR54, LR44, LR43, LR41 iyo LR9.
Lithium: sidoo kale waxaa jira qaar leh danab 3v. Iyada oo leh nolol waxtar leh oo dheer oo awood u leh inay ka shaqeyso safafka heerkulka oo aad u ballaaran. Batariyadaan waxaa lagu calaamadeeyay CR oo ah lithium manganese dioxide iyo BR oo loogu talagalay monofluoride lithium-polycarbonate (lithium thionyl chloride sidoo kale waa jirtaa, inkasta oo ay dhif tahay, oo leh 3.6v iyo cimri-dherer oo dhaafi kara 10 sano, codsiyada muhiimka ah iyo koodh TL). Tusaale ahaan, CR1025, CR1216, CR2032, BR2032, CR3032, iwm. Dhammaantood oo leh cabbirro kala duwan.
Xabagta qalinka: waxay gaari karaan 1.55v waxayna leeyihiin wax qabad heerkulka aad u hooseeya. Waxaa lagu kala saaraa koodhadhka SR, sida SR41, SR55, SR69, iwm.
Unugyada hawada-zinc: waxay aad ugu badan yihiin qalabka gargaarka maqalka sababtuna waa cabirkooda iyo rakibidda fudud. Iyadoo danab of 1.4 volts. Lambarkiisu waa PR, sida PR70, PR41 ...
Baytariyada Kaamirada: Waxay la mid yihiin kuwii hore, waxaana sidoo kale jira kuwo lithium ah, laakiin waxay badanaa ku yimaadaan baakado gaar ah oo loogu talagalay aaladahaas. Way ka weyn yihiin cabbirka, waxayna bixin karaan danabyo laga bilaabo 3 illaa 6 volts. Iyada oo leh furayaasha CR kiiskan. Sida CR123A, CR2, 2CR5, CR-V3, iwm.
Dib loo buuxin karo
Sida magaceeda ka muuqata, waa baytariyada, in kasta oo dad badani dhahaan baytariyada dib-u-soo-ceshada (dhab ahaantii, waxay yeelan karaan qaab isku mid ah oo waxay u ekaan karaan baytariyada aan dib loo buuxin karin). Noocyada noocaan ah baytariyada looguma talagelin in hal mar la isticmaalo, laakiin waa la isticmaali karaa marar badan, oo leh wareegyo badan oo lacag-bixin ah. Kuwa ugu caansan waa:
Ha u isticmaalin NiCd ama NiMH charger baytariyada lithium, ama si kale. Midka saxda ah waa in loo adeegsadaa kiis kasta.
NiCd: Batariyadaan nikkel-cadmium aad bay caan u ahaayeen, waxaana loo isticmaalayay si ka sii yar iyadoo ay ugu wacan tahay saamaynta xusuustooda. Si kale haddii loo dhigo, awoodeeda ayaa ku yaraata isticmaalka. Waxay socon karaan ilaa 2000 wareegyo lacag -bixin iyo dheecaan, taas oo ah tiro aad u cajiib ah.
NiMH: aad bay caan u yihiin, oo ma laha saamaynta xusuusta sida kuwii hore oo kale. Intaa waxaa dheer, waxay taageeraan cufnaanta tamarta sare, taas oo iyana wanaagsan. Waxay leeyihiin heerkooda is-saaridda oo sarreeya iyo xawaaraha lacag-bixinta ee hooseeya marka la barbar dhigo NiCd. Waxay kaloo aad ugu nugul yihiin isbeddelka heerkulka. Waxay soconayaan inta u dhaxaysa 500 iyo 1200 wareegyada lacag-bixinta.
Li-ion: waa kuwa ugu badan ee maanta loo isticmaalo guryahooda cajiibka ah. Waxay taageeraan cufnaanta tamarta sare unug kasta marka loo eego NiCd iyo NiMH, sidaa darteed waxaa loo dhisi karaa mid aad u cufan oo fudud. Saamaynta xusuustoodu waa ficil ahaan dayacaad, sidoo kale heerka is-bixintooda, laakiin waxay leeyihiin dhibco daciif ah, maadaama cimrigoodu uusan gaarin wareegyada NiCd. Xaaladdan, waxay u dhexeeyaan 400 iyo 1200 wareegyo lacag-bixin ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Qaybaha elektarooniga ah » LR41: wax badan ka baro baytariyadaan
Sirdoonka macmalka ah iyo xannibaadda Horizon Oasis